လကျရှိခဈြသူကို တဈသကျလုံး လကျတှဲသှားမယျလို့ ဆုံးဖွတျထားရငျ - ONE DAILY MEDIA
“အိမျထောငျရေး” သာယာဖို့ဆိုရငျ ဒီ(၆)ခကျြကို သိထားဖို့လိုတယျ။
၁။ ခေါငျးအေးအေးထား စဉျးစား
ဟုတျတယျ။ ငါတို့ ခေါငျးအေးအေးထားရမယျ။ တကယျတော့ ငါတို့ ရနျဖွဈကွတာ ခဏတာလေးပါ။ ဒီခဏလေးပွီးရငျ အကွာကွီးဝေးဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျဘူးလေ။ ငါတို့ရနျဖွဈတာရော၊ ဘာကွောငျ့လဲ? လမျးခှဲဖို့လောကျထိရော၊ ဖွဈသငျ့ရဲ့လား? ဘာတှကွေောငျ့ ဒီအခွအေနတှေအေထိ ဖွဈလာခဲ့လဲ? ငါတို့ ခေါငျးအေးအေးထားပွီး စဉျးစားမယျ။
၂။ မှားတဲ့သူ တောငျးပနျကွေး
ခဈြသူရေ ဘယျသူမဆို ကိုယျမှားတာကို တာဝနျယူမှ၊ ဝနျခံမှ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျတို့ ခဈြသူတှကွေားမှာပေ့ါ။ အမှားကိုသိရငျ အမှနျပွငျရမယျ့သတ်တိ ငါတို့မှာ ရှိရမယျလေ။ မှားတဲ့သူက အရငျတောငျးပနျကွေးနျော။ နောကျပွီး တောငျးပနျတာကိုလညျး လကျခံကွေး။ ခှငျ့လှတျကွေးနျော။
တကယျတော့လေ ဘယျသူမှားမှား ဘယျသူမှနျမှနျ၊ တကယျခဈြရငျ အလြော့ကို ပေးရမယျ။ ဒီကမ်ဘာကွီးမှာ တကယျခဈြတဲ့သူတိုငျး တဈမြိုးစီရူးသှပျတာ နငျလညျး သိသားပဲ။ ကဲ ငါကတော့ နငျ့ကိုသိပျခဈြလို့ နငျမှားလညျး ငါကပဲ တောငျးပနျအလြော့ပေးပါ့မယျ။
ငါတို့ကွား ရနျပှဲတှကေို ဦးတညျလာတာနဲ့ အျောမပွောပါနဲ့။တဈယောကျကိုတဈယောကျ မစျောကားမိပါစနေဲ့။ ခံစားမှုတှကေို အရမျးကွီး ရှတေ့နျးမတငျပါနဲ့။
၅။ တဈယောကျအပျေါတဈယောကျ လေးစားမှု
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွား လေးစားမှု ဆိုတာသာ ရှိနရေငျ အတ်တတှမေရှိဘူး။ အထငျအမွငျ လှဲမှားတာတှေ မရှိဘူး။ ရနျပှဲတှဆေိုတာလညျး နညျးလိမျ့မယျ။ နငျနဲ့ငါအကွား အပွနျအလှနျ လေးစားမှု ဆိုတာသာ ရှိခဲ့ရငျ တို့ရဲ့အခဈြခရီးက ဖွောငျ့ဖွူးနမှောပါ။
အခဈြတဈခုမှာ ခဈြခွငျးပွီးရငျ အရေးအကွီးဆုံးက နားလညျမှုပဲတဲ့။ နားလညျမှုက ရနျပှဲတှကေို ကြျောလှားစတေယျ။ စဈပှဲတှကေို ရပျတနျ့စတေယျ။ ပဋိပက်ခတှကေို အပွီးသတျစတေယျ။ ငါတို့အကွား နားလညျမှုတှရှေိနသေ၍တော့ ကြောခိုငျးသှားကွရမှာ မဟုတျပါဘူး။
လက်ရှိချစ်သူကို တစ်သက်လုံး လက်တွဲသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင်
If you decide to stay with your current lover for life
“အိမ်ထောင်ရေး” သာယာဖို့ဆိုရင် ဒီ(၆)ချက်ကို သိထားဖို့လိုတယ်။
၁။ ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစား
ဟုတ်တယ်။ ငါတို့ ခေါင်းအေးအေးထားရမယ်။ တကယ်တော့ ငါတို့ ရန်ဖြစ်ကြတာ ခဏတာလေးပါ။ ဒီခဏလေးပြီးရင် အကြာကြီးဝေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ငါတို့ရန်ဖြစ်တာရော၊ ဘာကြောင့်လဲ? လမ်းခွဲဖို့လောက်ထိရော၊ ဖြစ်သင့်ရဲ့လား? ဘာတွေကြောင့် ဒီအခြေအနေတွေအထိ ဖြစ်လာခဲ့လဲ? ငါတို့ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားမယ်။
၂။ မှားတဲ့သူ တောင်းပန်ကြေး
ချစ်သူရေ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်မှားတာကို တာဝန်ယူမှ၊ ဝန်ခံမှ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တို့ ချစ်သူတွေကြားမှာပေ့ါ။ အမှားကိုသိရင် အမှန်ပြင်ရမယ့်သတ္တိ ငါတို့မှာ ရှိရမယ်လေ။ မှားတဲ့သူက အရင်တောင်းပန်ကြေးနော်။ နောက်ပြီး တောင်းပန်တာကိုလည်း လက်ခံကြေး။ ခွင့်လွှတ်ကြေးနော်။
တကယ်တော့လေ ဘယ်သူမှားမှား ဘယ်သူမှန်မှန်၊ တကယ်ချစ်ရင် အလျော့ကို ပေးရမယ်။ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ တကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်း တစ်မျိုးစီရူးသွပ်တာ နင်လည်း သိသားပဲ။ ကဲ ငါကတော့ နင့်ကိုသိပ်ချစ်လို့ နင်မှားလည်း ငါကပဲ တောင်းပန်အလျော့ပေးပါ့မယ်။
ငါတို့ကြား ရန်ပွဲတွေကို ဦးတည်လာတာနဲ့ အော်မပြောပါနဲ့။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မစော်ကားမိပါစေနဲ့။ ခံစားမှုတွေကို အရမ်းကြီး ရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့။
၅။ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် လေးစားမှု
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြား လေးစားမှု ဆိုတာသာ ရှိနေရင် အတ္တတွေမရှိဘူး။ အထင်အမြင် လွဲမှားတာတွေ မရှိဘူး။ ရန်ပွဲတွေဆိုတာလည်း နည်းလိမ့်မယ်။ နင်နဲ့ငါအကြား အပြန်အလှန် လေးစားမှု ဆိုတာသာ ရှိခဲ့ရင် တို့ရဲ့အချစ်ခရီးက ဖြောင့်ဖြူးနေမှာပါ။
အချစ်တစ်ခုမှာ ချစ်ခြင်းပြီးရင် အရေးအကြီးဆုံးက နားလည်မှုပဲတဲ့။ နားလည်မှုက ရန်ပွဲတွေကို ကျော်လွှားစေတယ်။ စစ်ပွဲတွေကို ရပ်တန့်စေတယ်။ ပဋိပက္ခတွေကို အပြီးသတ်စေတယ်။ ငါတို့အကြား နားလည်မှုတွေရှိနေသ၍တော့ ကျောခိုင်းသွားကြရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခဈြသူမိနျးကလေးအပျေါ သငျ သစ်စာမဖောကျပါနဲ့